♪ Angel Shaper: November 2009
နိုးမိုးဝဲလ်... ဘာဝဲလ် ညာဝဲလ်... သိဝူးးးး
ANyo! Illustration Concept Art Studio
ပြည်တော်ပြန်သူအတွက် နှုတ်ဆက် စကားလုံးများ
ဒဒွေးမောင်နှမများနှင့် အမှတ်တရ နှုတ်ဆက်ပွဲလေးများ
ခင်မင်မှု အမှတ်တရလေးများ (11)
ပါးပါးလေးတွေးပြီး ပေါ့ပေါ့လေးပြုံးဖို့(4)
ပုံပြင်၊ ၀တ္ထုတိုလေးများ (2)
ရင်ဘတ်ထဲက အမှတ်တရများ (13)
Posted by Angel Shaper
ဒဒွေး မောင်နှမများရဲ့ အမှတ်တရ စကားလုံးလေးတွေ ပြန်ပြီး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ရင်ထဲက ဆုတောင်းလေးတွေ အတွက် ကျေးဇူးအကြီးကြီးတင်ပါတယ်။
"ငါ့လက်ကို ဖြတ်ချင်တယ်ဟာ။ နင့်အတွက် ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်တောင် စပ်မပေးနိုင်ဘူး။ ဒီညကစပြီး နင့်အတွက် အမှတ်တရ ကဗျာလေး ရေးကြည့်မယ်နော်" လို့ ချွဲသွား၊ အချစ်ပြသွားတဲ့ သမီးကြီး အိန်ဂျယ်ရဲ့ အကိုတော် ကိုသားကြီး ရဲ့ ကဗျာလေးကိုလဲ မျှော်နေပါတယ်။ မပြန်ခင် Angel Shaper နဲ့အတူတူ အားလုံးပဲ ဖတ်ခွင့်ရမယ် လို့လဲမျှော်လင့်မိပါကြောင်းးးးးးးးး (ထင်တော့မထင်.. အဟဲ)
ဒါကတော့ ကိုလင်းကြယ်ဖြူရဲ့ အမှတ်တရ စကားလုံးလေးတွေပါ။
သူငယ်ချင်း Dim ရေ....
ခဏလေးပဲ တွေ့ကြရတာဆိုပေမယ့် တကယ့်မောင်နှမအရင်းတွေ သူငယ်ချင်းအရင်းတွေလို ခင်မင်မှုတွေက မှတ်တမ်းတစ်ခုအဖြစ် အမြဲရှိနေမှာပါ... ကန့်သတ်တားဆီးလို့ မရနိုင်တဲ့ အချိန်တွေနဲ့ ဘဝ အနေအထားတွေ အရ တို့တတွေ ပျော်လို့တောင်မဝသေးခင် အခြေအနေအရ နယ်ခြား အရပ်တစ်ပါးကို အောင်မြင်မှုတွေ ရယူနိုင်ဖို့ အားမာန်အပြည့်နဲ့ ရွက်လွှင့်မယ့် သူငယ်ချင်းအတွက် အားသစ်မာန်သစ်တွေ ရယူနိုင်ပြီး လိုရာ အောင်ပန်းကို ဆွတ်ခူးနိုင်စေဖို့ဘာမှ သိပ်မကောင်းပေမယ့် တတ်စွမ်းသမျှ လက်လှမ်းမီသလောက်လေး အားစိုက်ရင်း ရင်ထဲကထွက်ကျလာတဲ့ စာစုလေးတွေကို လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးလိုက်ပါရစေ....
တရုတ်တန်းက ကြေးအိုးဆိုင်ရယ်၊ ဝက်သားဆိုင်ရယ်၊ ကာရာအိုကေ စက်ကြီးတစ်လုံးရယ်၊ ရေခဲမုန့်ချိုချို အေးအေးလေးတွေရယ်၊ Noodle House ရယ်၊ (Wild Wadi,Water Park)ရေကမ္ဘာ အပန်းဖြေဥယျာဉ်ကြီးရယ်၊ Ski Dubai က Snow Park ရယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ ဒူဘိုင်းဆိုတာကြီးရယ်က ငါတို့အားလုံးနဲ့ နင့်အတွက် ထာဝရ အမှတ်တရ ရှိနေမှာပါဟာ....
တချိန်ချိန် တနေ့နေ့ တနေရာရာမှာ ငါတို့တွေ နင့်ကို ဝမ်းသာအားရပြန်တွေ့ခွင့် ရခဲ့မယ်ဆိုရင် တို့တတွေ အဲ့ဒီအချိန် အဲ့ဒီနေ့မှာ ငယ်မူပြန်လို့ လတ်ဆတ်တဲ့ပျော်စရာတွေကို နောက်တစ်ဖန်ပွေ့ပိုက်ရင်း ပျော်လိုက် ကြတာပေါ့နော။ ငါနှုတ်မဆက်တော့ပါဘူး။ လူချင်းသာ ဝေးကြရတာပဲ၊ ရင်းနှီးမှုတွေကို အချိန်တွေနဲ့ အနေအထားတွေက ဘယ်လိုမှ တိုက်စားမသွားနိုင်ဖူးလို့ ယုံကြည်လို့ပါပဲ....
လာမည့်အနာဂတ်၊ နင့်ရဲ့ အနာဂတ်အတွက် လိုသလိုသုံးရအောင် ငါကြိုက်တဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ရယ်၊ ငါကိုယ်တိုင် ခံစားရင်း နှုတ်ဖျားကထွက်ကျလာတဲ့ ခံစားမှုစာစုလေးတွေကို နင့်အတွက် အမှတ်တရလက်ဆောင် ပေးလိုက်ပါရစေ။ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ အထောက်အကူ နဲနဲလေးလောက် နင့်အတွက်ဖြစ်စေမယ်ဆိုရင် ကဗျာလေးတွေက တကယ်ကို အမှတ်တရပေါ့နော။
ငါ ဖတ်ရင်းအားမာန်တွေခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်က ဆရာကြီး ဦးဘဂျမ်းရဲ့
အကျဉ်းစံရတဲ့ ငှက် ပို ပျံနိုင်လိမ့်မယ်။
ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင် တတ်စွမ်းသလောက် နဲ့ လက်လှမ်းမီသလောက် မတတ်တခေါက်နဲ့ .....
အချိန် နဲ့ ရက်စွဲ
နာရီနဲ့ ပြက္ခဒိန်ထဲ က
အချိန် နဲ့ ရက်စွဲတွေ
ပွေ့ဖက်နမ်းချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိလို့ ပြန်တောင်းချင်တောင်
ဒါကတော့ ဦးပီ (ကိုပီတာရဲ့ အတွေးပုံရိပ်များ)ရဲ့ အမှတ်တရ စကားလုံးလေးတွေပေါ့။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ညီမလေးနဲ့ သိရတာဝမ်းသာပါတယ်။ ချစ်ခင်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်တယ်ဆိုတာ ဒါ ပါရမီတစ်ခု ပေါ့နော်။ ဒီတိုင်းချစ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေ။ သူ့မှာချစ်မွှေးပါလာလို့ပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးအောင်မြင်ပါစေ။
ယုံအောင်လဲပြောတတ်၊ လွမ်းအောင်လည်းချွဲတတ်တဲ့ တောင်ပေါ်သူလေးရေ....
ခဏတာဆုံတွေ့ ခင်မင်ခဲ့ရတဲ့အတွက် ၀မ်းသာကျေနပ်မိပါတယ်.....
အခုတော့အားလုံးထက်အရင် ဒူဘိုင်းအလွန်တစ်ဘူတာမှာ ဆင်းသွားတော့မယ်ပေါ့.....
တို့လည်းတစ်နေ့နေ့ကျရင် ဒီဘူတာကနေဆင်းပြီး နောက်ရထားပြောင်းစီးရမှာပါပဲ....
May all the love of those who matters to you, come to you beyond measure.
ဒါကတော့ သူငယ်ချင်းလေး ဝေယံရဲ့ အမှတ်တရစကားလေးပါ။
သိတာသိပ်မကြာသေးဘူး။ အခုမှပဲတွေ့ဖူးတယ်။ ခင်ဖို့လဲ သိပ်ကောင်းတယ်။
မြန်မာပြည်ပြန်သွားပြီးရင်လဲ အကြာကြီးမနေပါနဲ့နော်။ အမြန်ဆုံးပြန်ထွက်လာနိုင်ပါစေ။
အားလုံးနဲ့ အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ်။ Dim ရေ တနေ့နေ့တော့ ပြန်ဆုံဦးမှာပါ။ ခဏလေးတွေ့ပြီး ပြန်ခွဲရတော့လေ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ ရောက်လေရာ နေရာတိုင်းမှာ အမြဲ ပျော်ရွှင်အောင်မြင်ပါစေ။
အမြဲတမ်းပြုံးပြုံးရယ်ရယ်နေတဲ့ Dim အမြဲတမ်းပြုံးရယ်နိုင်ပါစေနော်။ အမြဲတမ်းလဲ အဆင်ပြေပါစေ။ အောင်မြင်ပါစေ။ အမြဲတမ်းလဲ ခင်ဦးမယ်နော်။ မမေ့နဲ့နော်။
ဒါလေးကတော့ ကျွန်တော်တို့အိမ်က ငဇော်ရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲက စကားလုံးလေးတွေပေါ့။
လူအသစ် တစ်ယောက်တိုးလာလို့ ငါတို့တော့ အင်အားတောင့်ပြီဆိုပြီး ၀မ်းသာမယ် ကြံတုန်းရှိသေးတယ်
လူအဟောင်း တစ်ယောက် လျော့သွားတော့မယ် ...
လူတိုင်း ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်ကြတာချည်းပဲဆိုပေမယ့် ..
နှလုံးသားရှိသူတိုင်း သံယောဇဉ်နဲ့ မကင်းနိုင်ကြဘူးမို့လား ...
အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံရမယ်ဆိုရင်လေ ..
အဲ့ဒီနေ့က အိမ်ကျယ့်မျက်နှာကို ကျနော်မကြည့်ချင်ခဲ့ဘူးဗျာ ..
အထူးသဖြင့် ရထားစီးဖို့ စက်လှေကားက အဆင်း အိမ်ကျယ့်ကိုနောက်ဆုံးကြည့်လိုက်ရတဲ့အကြည့်ပေါ့...
ကျနော့်ကို နာကျင်စေခဲ့လို့ပါ ..
ခံစားရမယ်မှန်းသိရင် အစထဲက ဆုံစည်းခဲ့ဖို့မကောင်းဘူးလို့လဲ အိမ်ပြန်လမ်းတစ်လျှောက် တွေးလိုက်မိတယ်....
အခု .. ကျနော် ..
သူ (သူမ) ကို လွမ်းနေရပြီလေ ...
ချစ်မကြီး မနှင်း(နှင်းနဲ့မာယာ)ကလဲ ခုလို တခမ်းတနား နှုတ်ဆက်စကားခြွေခဲ့တယ်လေ။
Dim နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အမှတ်တရတွေကအများကြီးပဲ။ သူနဲ့ ပိုက်ဆံတွေလဲ အများကြီးကုန်တယ်။ လမ်းတွေလဲ အများကြီးလျှောက်ခဲ့ရတယ်။ အဲကောင်မလေးနဲ့ပေါင်းပြီးမှ ဒုက္ခတွေလဲ အများကြီးရောက်တယ်။
ဒူဘိုင်းသူ လူဆိုးမလေးတွေထဲက တစ်ယောက်ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ စိတ်လဲမကောင်းဘူး...
ချစ်မကြီးလို့ခေါ်ပြီး ချွဲနေတဲ့ အိန်ဂျယ်နဲ့ ဒေါ်လေး ဒေါ်လေးနဲ့ တချိန်လုံး စနောက်နေတတ်တဲ့ ဇော်တို့ကို
ညီမလေးတွေလို အရမ်းကို သံယောဇဉ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်...
ငုံကတော့ စကားများလွန်းလို့ သူနဲ့တွေ့ရင် ပတ်ပြေးနေရတာ..
သမီးပျိုက သူငယ်ချင်း အရင်းကြီး သူ့ကိုတော့ မနိုင်လို့ လွှတ်ထားတာကြာပေါ့...
ရှိတာက မဟာအင်အားကြီး မိန်းမသား ငါးယောက်
အားလုံးထဲမှာ မျက်နှာပြောင်ပြီး ပွဲကို ထိန်းတတ်တဲ့ အိန်ဂျယ်တစ်ယောက်ပြန်တော့
သူ့အဖော် ဇော်က တစ်ပင်တိုင်မင်းသမီးလေးအဖြစ်နဲ့ လွမ်းနေလေရဲ့...
အိန်ဂျယ်က ဓါးပြတိုက်တာတော်တယ်။ ပွဲရှိပီလားဟေ့ဆိုရင် သူဓါးပြတိုက်နေကျ ရေခဲမုန့်တွေ နောက်ဆိုရင် ကပ်မစားရတော့ဘူးပေါ့...
ကိုယ်က လူကြီးဆိုတော့ သူ့လို ဓါးပြတိုက်ရင် မရမှာသေချာတယ်...
အိမ်ဂျယ့်ကို လွမ်းမှာထက် သူ့ရေခဲမုန့်တွေကို ပိုလွမ်းမိမှာ သေချာတယ်...
လေဆိပ်ကို လိုက်မပို့တော့ဘူးနော်။ ဇော်ငိုတာတွေ့ရင် ကျုပ်လဲ မချော့တတ်ဘူး ဝိုင်းငိုမိမှာသေချာတယ်...
နေရာတိုင်းမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ အိန်ဂျယ်လေးရေ...
ဒါကတော့ သူငယ်ချင်းလေး သမီးပျိုရဲ့ အမှတ်တရ စကားလုံးတွေပေါ့။
ကိုဖြိုးရဲ့မွေးနေ့လေးကို သတိရမိသေးတယ်နော်။ ငါတို့တွေ သူများအမြင်ကတ်တဲ့ထိ သီချင်းတွေ အော်ဆို ကြတာလေ။ ငါကမဆိုတတ်တော့ နင်နဲ့ကပ်ဆိုရတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ငါတို့တွေ အရမ်းပျော်ခဲ့ကြတယ်နော်။ နင် အမှတ်၁၀၀ ရတော့ ငါလေ..ပျော်လိုက်တာ။ ပြီးတော့လေ ဘကြီးမိုး လိုက်ကျွေးတဲ့နေ့တုန်းကလေ ငါတို့ကလေးအုပ်စု ခံလိုက်ရသေးတယ်လေ။ ငါတို့အရည်တွေပဲ အ၀သောက်ကြတာလေ။ ငါတို့ဗိုက်ဝမှ လူကြီးတွေက ရှယ်တွေမှာတာလေ။ ငါတို့ခံလိုက်ရတယ်...ဟားဟား ဘာပဲပြောပြော ဒါတွေက အမှတ်တရတွေ ပေါ့နော်။ ငါဘယ်တော့မှ မေ့နိုင်မယ် မထင်ဘူး။
ပါးချိုင့်လေးနဲ့နင့်ကို ငါအမြဲသတိရနေမယ်ဆိုတာ နင်ယုံပေးပါနော်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိတဲ့နင်က ခင်မင်သူပေါလို့ သူငယ်ချင်းအတွက် ဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပေါ့။ ဟန်ဆောင်မှု ကင်းတဲ့နင်က......ဘယ်တော့မှ အထီးကျန် မနေနိုင်သလို ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ခင်မင်သူတွေပေါလို့ ငါ့သူငယ်ချင်းလေး ပျော်ရွင်နိုင်မှာပါဟာ။ ငါတို့တွေ ခွဲကြရတော့မယ် ဆိုပေမယ့် ငါ့ရင်ဘတ်ထဲမှာ နင်ရှိနေပါတယ်။ တွေ့ခဲ့ကြတဲ့ အချိန်တွေက တိုတောင်းလှတယ် ဆိုပေမယ့် ရင်ထဲမှာ နက်ရှိုင်းနေတယ်ဆိုရင် ငါတို့ရဲ့ခင်မင်မှုက အဆုံးမရှိပေါ့နော်။
အိန်ဂျယ်ရယ်...ငါလေ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် နင့်ကိုမသွားစေချင်ဘူးဟာ။ ပျော်ရွင်စရာနေ့ရက်တွေက အမှတ်တရ အတိတ်အနေနဲ့ ကျန်ရှိခဲ့ပေမယ့် နောင်လာမယ့်အချိန်တိုင်းမှာ နင်မရှိတော့ သီချင်းဆိုမယ့် သူလည်းမရှိတော့ဘူးနော်။ ငါလေနင်နဲ့တွဲလို့ ရေခဲမုန့်လည်းကြိုက်တတ်နေပြီဟ။ ငါစားတိုင်း နင့်ကို သတိရနေမယ်နော်။ ထားလိုက်ပါတော့ အိန်ဂျယ်ရယ် ...မနက်ဖြန်ရဲ့နေ့ရက်တွေတိုင်းမှာ စက္ကန့်အချိန်တိုင်း ပျော်ရွင်နိုင်ပါစေလို့ ငါဆုတောင်းပေးနေပါ့မယ်နော်။
အချိန်တိုင်း မအားတဲ့ငါ့ကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ပွဲတိုင်းပါအောင် ညှိပေးကြလို့ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာ။ နင်ပြန်မယ့်နေ့မှာလည်း ငါရှိမနေပြန်ဘူး။ နောက်ဆုံးသွားကြမယ့် နေရာတွေကိုလည်း ငါမလိုက်နိုင်ပြန်ဘူးနော်။
ဒါပေမယ့် ငါ့စိတ်ကတော့ နင်နဲ့အတူရှိနေမယ်ဆိုတာ ယုံနော်။ အိန်ဂျယ်ပြန်မယ့် ခရီးလမ်း သာယာဖြောင့်ဖြူးလို့ ရှေ့ဆက်ရမယ့်လမ်းခရီးတွေလည်း အောင်မြင်ပါစေဟာ။
အားလုံးရဲ့ ချစ်စရာ အမှတ်ရစရာ နှုတ်ဆက်ဆုတောင်းလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးအကြီးကြီးးးးးးးးး အများကြီး တင်ပါတယ်နော်။
Labels: ရင်ဘတ်ထဲက အမှတ်တရများ
Angel Shaper ရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် နှုတ်ဆက်ပွဲကို ၂၃.၁၀.၀၉ (သောကြာနေ့)က ဒဒွေးမောင်နှမများ ဆုံဆည်းရာ Rolex Tower မှာ ဘကြီးများ အကိုတော် အမတော်များ နဲ့ အတူ ပျော်စရာအကောင်းဆုံး ကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီနေ့ ပျက်ကွက်သူတွေကတော့ အမိမြေရောက် ကိုချမ်းနဲ့ မဒမ်ချမ်း၊ လတ်လတ်ဇော်နဲ့ အလုပ်များနေတဲ့ ကိုဖြိုး (လင်းကြယ်ဖြူ) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်မကြီး မနှင်း (နှင်းနဲ့မာယာ) နဲ့ အရောက်သွားတော့ စပွန်ဆာပေးမဲ့ ဘကြီးမိုး တစ်ယောက်ထဲ ရောက်နေ လေရဲ့။ သူက စားနေကျဆိုင်ထက် ပိုအဆင်ပြေမဲ့ Tower ကြီးရဲ့ အပေါ်ဆုံးထပ် ဝရံတာမှာ ပိုစားကောင်းတယ် ဆိုပြီး စီစဉ်ထားပါတယ်။ ခနနေတော့ မငုံ (ကန္တာရမိုးစက်များ) နဲ့ သမီးပျိုတို့ ရောက်လာတယ်။ အထူးဧည့်သည် ကြီးဖြစ်တဲ့ ဒူဘိုင်းရွှေရောင်စဉ်ရဲ့ ကလောင်ရှင် (ဒူဘိုင်းရောက်မြန်မာMID အဖွဲ့ ကြီးအတွက်ပါ အားတက်သရော ပါဝင်နေသူ) ကိုသံလွင်လင်းဦးလည်း ရောက်လာပါတယ်။ ဦးပီ (ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်)ကတော့ အချိန်တိတိ ကျကျ ရထားကြီးစီးပြီး ထွက်လာပေမယ့် နေရာကို ကျော်လိုက် ခွလိုက်နဲ့မို့ ဘကြီးမိုးဆင်းခေါ်မှပဲ နေရာမှန်ကို ရောက်လာနိုင်ပါတော့တယ်။ တစ်အောင့်နေတော့ အန်ကယ်ဦးကျော်ခင်နဲ့ဆရာဝန်ဒေါက်တာ မမဆုလှိုင်ဝင်း တို့လည်းရောက်လာတယ်။ ဘကြီးသာ(ကိုသာယာ) တစ်ယောက် ကတော့ နောက်ဆုံးမှပဲ သာသာယာယာ ရောက်လာပါတယ်။
လူစုံတော့ စားသောက်ဖို့ မှာကြတယ်။ ဟော့ပေါ့အရင်မှာတယ်။ ပြီးတော့ ဟင်းတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုမှာကြတယ်။ စားပွဲပေါ်မှာက စားစရာတွေက အစုံပါပဲ။ စားသောက်ရင်း ပြောကြ ဆွေးနွေးကြတယ်။ လူကြီးတွေ စကားပြော ကောင်းနေတုန်း စကားထက် အစားမက်တဲ့ မငုံ၊ သမီးပျို နဲ့ Angel Shaper တို့ဟာ ကလေးပီပီ အားရပါးရ စားကြတယ်။ ဟော့ပေါ့ကလဲ တစ်အိုးပြီးတစ်အိုး ကုန်တယ်။ ကိုယ့်ရှေ့ကအိုးကုန်လို့ ထပ်ဖြည့်တုန်း မဆူခင် တဖက်က လေပေါနေတဲ့ လူကြီးတွေရဲ့ အိုးနဲ့ ပြန်လဲ။ ဟဲဟဲ။ ပြီးတော့ Avocado လေးသောက်လိုက်၊ ကော်ပြန့်ကြော်လေးစားလိုက်နဲ့ နောက်ထပ် ဆက်ဆွဲမဲ့ပွဲအတွက် အားယူဖို့ Toilet တောင် သွားလိုက်ရ သေးတယ်လေ။ ခစ်ခစ်
Toilet အမှတ်တရတစ်ခု ပြောရမယ်ဆိုရင် Toilet ဆိုတာလဲမြင်ရော သုံးယောက်သား ကျေနပ်သွားတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ ဝင်ချသွားလိုက်ကြတာ အထဲမှာ သူ့ ကိစ္စသူလုပ်နေတဲ့ ကုလားတစ်ယောက် ကိုမြင်မှပဲ နေရာမှားဝင်လာမှန်း အထိတ်တလန့် သိလိုက်ရပါတော့တယ်။ အမျိုးသား Toilet ကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျာ...ဟားးဟားးးး ဒီလိုနဲ့ သုံးယောက်သား ပြုံးစိစိနဲ့ ပြန်ထွက် လာရတာပေါ့။ ပြန်ထွက်မလာချင်လို့မှ မရတာကိုလေ။ အဟဲ...ဒီလိုနဲ့ အမျိုးသမီး Toilet ကို ကပြာကယာ ပြန်ပြောင်းပြေးရှာလိုက်ရတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး နောက်ဆက်ပွဲ စားစရာများကို ပြန်လည်ပြီး မှာယူ စားသောက်ကြပါတယ်။ ငါးကင် ကြီးတွေ၊ ငါးဟင်းအကောင်လိုက်ကြီးတွေ အများကြီးပဲဗျာ။ ဘယ်လောက်သောင်းကျန်းကြသလဲဆို "ဘကြီးမိုးရေ ဟိုဘက်စားပွဲက ကုလားမကြီးသောက်တဲ့ ဟာမျိုးသောက်ချင်တယ်" ဆိုတာမျိုးက ပါသေးတယ်။ ဟိဟိ........ အဲဒီနေ့ လူကြီးဝိုင်းက ဆွေးနွေးတာတွေ သိပ်များတော့ မမှတ်မိပါဘူး။ ဒူဘိုင်းမှာ မြန်မာတွေအတွက် အခမဲ့ စေတနာဆေးကုခန်းလေး ဖွင့်ဖို့တိုင်ပင်နေသံလည်း ကြားရပါတယ်။ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စရာပါပဲ။ အဲဒီနေ့လူကြီးတွေ စကားဝိုင်းတော်တော်နဲ့ကို မပြတ်တာဗျာ။ ကာရာအိုကေအစီအစဉ်မပါ၊ သီချင်းမဆိုရတော့ Angel Shaper တို့ ပျင်းပြီပေါ့။ ဂျီကျနေတဲ့ ကလေးတွေကို နားညည်းတဲ့အဆုံး ပထမအကြိမ်နှုတ်ဆက်ပွဲ ပြီးဆုံးကြောင်း ကြေငြာ အပြီးမှာ နားလည်လိုက်တာကတော့ အပျိုကြီးမနှင်းနဲ့ ဘကြီးမိုးတို့ရဲ့ လူလည်ကျတာကို ခံလိုက်ရတယ် ဆိုတာပါပဲ။ (ကာရာအိုကေ မပါအောင် အကွက်ဆင်ပြီး အဲဒီနေရာကို တမင်ရွေးပြီး ခေါ်လာမှန်း နောက်ကျမှ သိခဲ့ရတယ်လေ) ဟင့်ဟင့်။ မကျေနပ်ဘူးနော်။
ဒီလိုနဲ့ လမ်းမခွဲခင် Angel Shaper တို့အတွက် ရေခဲမုန့်ကတော့ မပါမဖြစ်ပါရပြန်ပါတယ်။ အန်ကယ် ဦးကျော်ခင်နဲ့ ဦးသာယာတို့ဟာ ရေခဲမုန့်ဖိုး ငါရှင်းမယ်၊ နင်ရှင်းမယ်နဲ့ ငြင်းခုန်နေကြပါတယ်။ ဘယ်လောက်ကုန်မယ်ဆိုတဲ့ အတွေ့အကြုံမသိသေးလို့ ငြင်းတာလဲ ဖြစ်နိုင်သလို သူတို့ရင်ထဲက စေတနာဆိုရင် ပိုမှန်မှာပေါ့။ အနိုင်ရသွားသူ ကတော့ ကံကောင်းသူ ဦးကျော်ခင်ဖြစ်ပြီး ကံဆိုးသူ ဦးသာယာ ရှုံးသွားပါတယ်။ ဒီတော့ အန်ကယ်ဦးကျော်ခင်ပဲ ရေခဲမုန့်ဖိုးတွေ တဝကြီးရှင်းလိုက်ရတာပေါ့လေ။
ဒီလိုနဲ့ ဘကြီးမိုးနဲ့ တကွ အဘတော်များ အကိုအမများကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပြီး ရေခဲမုန့်ဆိုင်ကနေ လမ်းခွဲလာကြပါတယ်။ "ဘကြီးမိုးရေ အရမ်းပျော်တာပဲ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာ။ အများကြီးကုန်မှာပဲနော်" ဆိုတော့ ဘကြီးမိုးက "ပါပါးလေးပါ" တဲ့။ "ဘာပါပါးလေးတုန်းဗျ ပိုက်ဆံအိတ် ပါးသွားတာကိုပြောတာလား" "မဟုတ်ရပါဘူးကွယ်။ သမီးတကယ်ပျော်တယ်၊ ကျေနပ်တယ်ဆိုရင် ကုန်ရကျိုးနပ်ပါတယ်" တဲ့လေ။ ဘကြီးမိုးရေ ကျေးဇူးသိပ်တင်ပါတယ်ဗျာ။
ဒုတိယအကြိမ်မြောက် နှုတ်ဆက်ပွဲ ကိုတော့ ၃၁.၁၀.၀၉ (စနေနေ့) မှာ ကိုဖြိုး (လင်းကြယ်ဖြူ)က စပွန်ဆာပေးပြီး ကိုဖြိုး၊ မနှင်း (နှင်းနဲ့မာယာ)၊ ငဇော် (ကျွန်တော်တို့အိမ်) နဲ့ Angel Shaper တို့လေးယောက် Burjuman Centre,( Noodle House )မှာ ပျော်ပျော်ကြီး ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနေ့က လူမစုံပါဘူး။ ဘကြီးမိုးက မြန်မာပြည် အလည်ခဏပြန်ပြီး၊ ကိုချမ်းက ပြန်မရောက်သေးဘူး။ ကျန်တဲ့ အဘတော်တွေ အကိုအမတွေက မအားလပ်ကြပါဘူး။ ဒီတော့ အားလပ်နေတဲ့ လေးယောက်သား ဝတ္တရားမပျက် မပါဝင်နိုင်တဲ့သူတွေအစား အများကြီး မှာစားခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီဆိုင်က ကိုမျိုးဆိုတာ ကိုဖြိုးရဲ့ အခန်းဖော် မြန်မာလူမျိုး သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ပါ။ သူကပဲ စတော်ဘယ်ရီရှိတ်ကို တစ်ယောက်တစ်ခွက်တိုက်တဲ့အပြင် Angel Shaper အရမ်းကြိုက်တဲ့ Jasmine Tea မွှေးမွှေးလေး ကိုလဲ အလကားတိုက်ပါသေးတယ်။ ကျေးဇူးသိပ်တင်တယ် ကိုဖြိုးနဲ့ ကိုမျိုးရေ....
တတိယအကြိမ်မြောက် အစီအစဉ်အနေနဲ့ ၇.၁၁.၀၉ (စနေနေ့)မှာ Angel Shaper ရဲ့ ပူဆာမှုကြောင့် ကိုလင်းကြယ်ဖြူ ကိုကျော်ကျော်ထိုက်တို့ ဦးဆောင်ပြီး Jumeirah က နာမည်အကြီးဆုံး၊ အလှဆုံး နဲ့ပျော်စရာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်တဲ့ Wild Wadi, Water Park ကို လိုက်ပို့ ပေးပါတယ်။ ပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေကတော့ ကိုကျော်ကျော်ထိုက်၊ ကိုဖြိုး၊ မနှင်း၊ သမီးပျို၊ Angel Shaper နဲ့အတူနေ အမတော် မဇာနည်။ မအေကေ၊ မင်းမင်းနဲ့ ချမ်းချမ်းတို့ ပဲပေါ့။
အဲဒီနေ့ ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ကြတယ်။ ရေဘောလုံးတွေစီးကြတယ်။ ရေလှိုင်ခေါင်းတွေစီးကြတယ်။ ဟိုးးးးးအမြင့်ဆုံး ကနေ ရေလျောစီးရတာ ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းသလို ပျော်ဖို့လဲသိပ်ကောင်းပါတယ်။ ရေကူးကြတယ်။ ဆော့လို့ရသမျှ အကုန်အကုန် ဆော့ပြီးချိန်မှာတော့ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက်ပွဲကို ဆက်မနွှဲခင် ကိုကျော်ကျော်ထိုက်က သူ့ ရဲ့ အိမ်တော်ကိုအလည်ခေါ်လို့ လိုက်သွားခဲ့ကြသေးတယ်။ ကိုကျော်ကျော်ထိုက်ရဲ့ မဟေသီချောလေး ဖျော်တိုက်တဲ့ ကော်ဖီနဲ့ မုန့်တွေ၊ အာလူးကြော်တွေကို စေတနာ အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အကုန်ပြောင်အောင် ကူညီ စားသောက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ မပေါ့မပါးနဲ့ ဧည့်ဝတ်ကျေပေးတဲ့ ကိုကျော်ကျော်ထိုက်ရဲ့ မဟေသီကို ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိသလို၊ နားရက်လေးမှာ မဟေသီ့အနားတောင် ကပ်ခွင့်မရလောက်အောင် သွားချင်ရာ လိုက်ပို့ကူညီပေးတဲ့ ကိုကျော်ကျော်ထိုက်ကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ဗျာ။
ကိုကျော်ကျော်ထိုက်တို့ရဲ့ ဂေဟာလေးကနေ စတုတ္ထမြောက် နှုတ်ဆက်ပွဲလေး ဆက်နွှဲဖို့ Burjuman Centre (Noodle House)ကို ညနေ ၆နာရီခွဲမှာ အားလုံးချီတက်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီပွဲလေးမှာတော့ ယောက္ခမလောင်း အလည်လာတာတောင် မအားလပ်တဲ့ကြားက ချစ်ညီမလေးကို နှုတ်ဆက်ချင်လို့ ဆိုပြီးရောက်လာတာ ချစ်ဖို့ ခင်ဖို့သိပ်ကောင်းတဲ့ မငုံပါ။ နောက်ပြီးတော့ နိုက်ဂျူတီအထွက် အိပ်ရေးမဝတဝနဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်းကို နှုတ်ဆက်ဖို့ လာတာ ဇော်ပေါ့။ ယုံအောင်လဲပြောတတ်တယ်၊ လွမ်းအောင်လဲ ချွဲတတ်တဲ့ ညီမလေးကို နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ကိုပီတာ နဲ့ ကျွန်တော် တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးဘူး၊ မေးမြန်းပြီးလာရမှာပဲ ဆိုကာ အရောက်လာတာ ဒဒွေး ဘလော့ဂါသစ်လေး မောင်ဝေယံ တို့ပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ဖွဲ့လုံး မောမောပန်းပန်း နဲ့ပဲ တစ်ဝကြီး မှာကြစားကြ သောက်ကြပါတယ်။ ဒီပွဲကိုလဲ ကိုလင်းကြယ်ဖြူရဲ့ ကဒ်လေးနဲ့ပဲ ဆင်နွှဲလာကြတာပါ။ အဲဒီဆိုင်မှာကိုမျိုးနဲ့မြန်မာ အမကြီး တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ လူ ၁၁ယောက်စာကို ၇ယောက်စာပဲယူတဲ့အပြင် ချက်ပြုတ်ခန်းထဲက မြန်မာ အကိုတွေကလဲ တစ်ပွဲကို ပုံမှန်သုံးပွဲစာလောက် အများကြီး လုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မြန်မာတွေရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်လေး တစ်ခုကိုလဲ မသိမသာလှမ်းတွေ့ နိုင်ပါတယ်။ မြင်တတ်ရင်ပေါ့။ အဟဲ.... ကိုမျိုးက သိပ်ကောင်းပြီး ဈေးသိပ်ကြီးတဲ့ Angel Shaper အကြိုက်ဆုံး Jasmine Tea လေးအိုး တိတိနဲ့ နောက်ဆုံး ဧည့်ဝတ်ကျေသွားလိုက်ပါသေးတယ်။ ပါဆယ်တော့ မဆွဲခဲ့ပါဘူး။ အဟဲ....
အဲလိုစားသောက်ပြီးတော့ တစ်ယောက်ချင်းစီကနေ အမှတ်တရ စကားလေးတွေ ချွေဖို့တောင်းဆိုပြီး ဖုန်းလေးနဲ့ Record လုပ်ထားတယ်။ တစ်ယောက်တစ်ခွန်းချွေပြီးချိန်မှာ ကိုပီတာက The Best Seller No.6 ရထားတဲ့ The Secret ဆိုတဲ့စာအုပ်ကောင်းလေး တစ်အုပ်နဲ့ တန်ဖိုးကြီးကြီးလှလှပပ ဖောင်တိန်လေးတစ်ချောင်း လက်ဆောင် ပေးတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ရဲ့ အထက်စာမျက်နှာတွေမှာ သူတို့တွေရဲ့ အမှတ်တရ လက်မှတ်လေးတွေလည်း ထိုးပေး ကြတယ်။ အရမ်းကို အမှတ်ရစရာ ကောင်းတဲ့ နှုတ်ဆက်ပွဲပါ။
Angel Shaper ဒူဘိုင်းကို မထင်မှတ်ပဲရောက်လာခဲ့တယ်။ ဒီဒူဘိုင်းကနေ ဒီလို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစု မောင်နှမတွေနဲ့ ဆုံရမယ်လို့ ထင်မထားမိဘူး။ ချစ်စရာသိပ်မကောင်းတဲ့ ခပ်ဆိုးဆိုး Angel Shaper ကို ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ သူတို့ရဲ့ မေတ္တာ၊ စေတနာတွေကြောင့်သာချစ်ခင်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒီလို မိသားစု မောင်နှမတွေ သာမက အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ မောင်နှမတစ်ချို့ ရသလို ဘလော့ပေါ်မှာလဲ ဖေကြီး၊ ဘကြီး အကိုအမ မောင်နှမတွေ အများကြီး ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီလူတွေအားလုံးဟာ ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ ဆုလေးတွေဖြစ်လို့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူး တော်ကိုလဲ ချီးမွမ်းပါတယ်။ မထင်မှတ်ပဲရရှိခဲ့တဲ့ အားလုံးရဲ့ မေတ္တာ၊ စေတနာနဲ့ ခင်မင်မှုလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပြီးရင်း ပိုမိုချစ်ခင်လာရပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ မေ့ဖျောက်လို့ရမှာမဟုတ်တဲ့ ခင်မင်မှုလေးတွေနဲ့ အမှတ်ရ သတိရနေမှာပါ။
Angel Shaper အတွက် စေတနာ၊ မေတ္တာ၊ အချိန်၊ ငွေ၊ အင်အား အများကြီး ပေးဆပ်ခဲ့ကြတာတွေအတွက် အတိုင်းထက်အလွန် ပါပဲလို့ ကျေးဇူးတင်စကားလဲ ပြောချင်ပါတယ်။ အားလုံး ပေးခဲ့တဲ့ ဆုတွေနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ။
အားလုံးလည်း မေတ္တာတရားနဲ့ ပြည့်ဝလို့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘဝလေးတွေ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝလေးတွေ ပိုင်ဆိုင် နိုင်ပါစေလို့လဲ တောင်းဆုပြုခဲ့တယ်။
စကားမစပ် ဒီအိမ်သစ်လှလှလေးဟာ Angel Shaperရဲ့ အကိုတော် ကိုသားကြီး စိတ်တိုင်းမကျမချင်း စိတ်ကြိုက် ဖြစ်အောင် ခေါင်းစားပြီး အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ အိမ်သစ်လေးပါ။ သူ့ရဲ့ အမှတ်တရ လက်ဆောင်လေးပေါ့။ ကိုသားကြီးကိုလည်း ကျေးဇူးကြီးကြီး တင်တယ်နော်။
Angel Shaper လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးပတ်လောက်ကတည်းက ကျန်းမာရေးတွေ ချူချာလိုက်တာ တုပ်ကွေးဖြစ်လိုက်၊ လေးဘက်နာဖြစ်လိုက်နဲ့ ဘယ်မှမလည်မပတ်နိုင်ဖြစ်နေလို့ သူငယ်ချင်းမောင်နှမတွေကိုလွမ်းနေပါတယ်။ (အရင်ချွဲပြလိုက်ဦးမှ... အဲလေ...ချွဲပြတယ် ထင်ကြဦးမယ်။ ဂယ်ပြောတာပါဂျာ)
လွန်ခဲ့တဲ့ တပတ်လောက်က လေးဘက်နာတွေ ပြန်ဖြစ်ပြီး တံတောင်ဆစ်က အရိုးကြီးတွေကိုက်လို့ ဘာလုပ်ရမယ် မှန်းလဲမသိဘူး။ ဆေးခန်းသွားပြဖို့ကလဲ ဆေးခန်းကပေးမဲ့၊ သောက်ရမဲ့ဆေးတွေကို ကြောက်လို့ မသွားချင်၊ အဲလို ပေတေနေလိုက်တာ။ ညညတောင် အိပ်မရအောင် ကိုက်လာတဲ့အဆုံးတော့ ဆေးခန်း ပြေးရပြီပေါ့။ ပြန်လာတော့ မသက်သာလို့ တစ်ခုခုလိမ်းမှဆိုပြီး လိမ်းဆေးလိုက်ရှာမိတယ်။ လိမ်းဆေးကလဲ ရှာမတွေ့တော့ ရှာတွေ့တဲ့ အကြောတွေ၊ ကြွက်သားတွေ နာရင်ဖျန်းတဲ့ Spray ဗူးကို ဒါလဲ ပူတာပဲလေ အဆင်ပြေမှာပါ ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒေါက်တာရမ်းကုလုပ်လိုက်တာ......ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ Allergy ဖြစ်တယ်လေဗျာ။ ဘယ်ဘက်လက်တစ်ခုလုံး ထုံကျင်ပြီး ယောင်ကုန်ရော။
အဲဒါ...ဘယ်လို လုပ်ရမယ်မှန်း မသိဘူး။ အခန်းထဲမှာကလဲ ဘယ်သူမှမရှိဘူး။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ သူငယ်ချင်း မောင်နှမတွေတော့ ရှိတယ်လေ။ ကိုမြစ်(မြစ်ကျိုးအင်း)ကိုတွေ့လို့ ပြောပြတယ်။ "အကိုရေ၊ သမီး ဒီလိုဒီလို ဖြစ်တယ်" ဆိုတော့ သူကလဲ ဖွားကီ့ကို လှမ်းမေးပေးတယ်။ ချစ်မကြီးမနှင်း (နှင်းနဲ့မာယာ) ကိုလဲတွေ့ လို့ "ချစ်မကြီးရေ သမီး ဒီလိုဒီလို ဖြစ်တယ်၊ ဟင့်ဟင့်" ဆိုပြီး ချွဲမိပြန်ရော.. သူကလဲ ကိုယ်တို့ ဒူဘိုင်းက ဆရာဝန် ဒေါက်တာမမဆုမွန်ကို ဖုန်းဆက်မေးပေးရှာတယ်။ ပါးလုံးကိုလဲ မရှောင်ဘူး။ "သူငယ်ချင်းရေ...ငါလေ ခု ဒီလို ဖြစ်နေတယ်ဟယ်။" ဆိုပြီး ငိုမိပြန်ရော...လူက ထူပူနေတာကိုးးးးးးးးးးး တွေ့ ရာလူကို ဒုက္ခပေးရတော့တာပေါ့။ သူလဲ သူသိသလောက် ဆေးတွေ ညွှန်းပေးရှာတယ်။ ဝက်ကလေးကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ အားပေးရှာပါတယ်။ "သမီးကြီး အိန်ဂျယ်ရယ် မသေနိုင်ပါဘူးဟယ်" တဲ့။ ငိုရမလို၊ ရယ်ရမလိုဖြစ်ရတာပေါ့။ ဝက်လေ အဲလိုပြောရက်တယ်။ ဟင့်ဟင့် (လူမဆန်လိုက်ပုံ...အဲလေ... က်မဆန်လိုက်ပုံများ ပြောပါတယ်။။ ဟွန်း)
အွန်လိုင်းနေတဲ့ အဒေါ်ကလဲ စိတ်ပူပြီး ဆေးခန်းမြန်မြန်ပြန်သွားနဲ့ အတင်းနှင်လွှတ်နေပြီ။ အဲဒီအချိန် အကိုမြစ်က "သမီးကြီးရေ ဘာမီတွန် ၂လုံးသောက်၊ ရေခဲအိတ်နဲ့ ယောင်တဲ့နေရာကို အုပ်လိုက်လို့ မကီပြောတယ်" တဲ့။ ချစ်မကြီးကလဲ မမဆုမွန်ဆီက ဆေးတွေလိုက်ညွှန်းနေတယ်လေ။ "ဘာမီတွန်၊ စီထရင်း၊ အလက်ဇန်" တွေ သောက်ရမတဲ့။ ဟင်...ဘာဆေးတွေလာပြောမှန်းမသိဘူးဆိုပြီးးးးးးး ကြံရာမရတဲ့ အဆုံး တစ်ဖက်ခန်းကိုပြေး ဘာမီတွန်သွားရှာပြီး ၂လုံး သောက်ချလိုက်တယ်။ ရေခဲသေတ္တာထဲက ရေခဲတုံးတွေကို အ၀တ်နဲ့ သေချာထုတ် ဒါပဲ အုပ်လိုက်တယ်။ တအောင့်နေတော့ အယောင်က တဖြည်းဖြည်းလျော့ကျလာပြီး ရင်ထဲက အလုံးကြီးလဲ တဖြည်းဖြည်းကျလာတယ်လေ။ ဟူးးးးးးးးးးး ဒါဟာ ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ရပေမယ့် Angel Shaper အတွက် တကယ်မမျှော်လင့်ပဲ ခြောက်ခြားခဲ့ရတဲ့ Accidental Allergy ပါပဲ။
ဒီလိုရောဂါတွေ သက်သာပြီးတော့ အိမ်ပြောင်းတာနဲ့ တိုက်ဆိုင်ပြန်ကော......... အိမ်သစ်မှာ နက်မရသေးလို့ သုံးလေးရက် စောင့်ရတယ်။ နက်ရတဲ့နေ့ သောင်းကျန်းမယ်လို့ ကြံရွယ်တုန်းရှိသေး ဟိုတစ်ခါဖြစ်တာဘယ်လက် ခုက ညာဘက်ပြန်ကိုက်တယ်လေ။ ဒီတော့ မနက်အိပ်ရာနိုးတာနဲ့ ချစ်မကြီး မနှင်းကို ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။ သူက "ချစ်ညီမရေ ဆေးဝယ်လာမယ်" တဲ့။ သူကိုယ်တိုင် အစားလာကျွေး၊ ဆေးတွေ တစ်ပုံကြီး ဝယ်တိုက်တယ်။ အဲဒီဆေးတွေ သောက်ပြီး ခုငြိမ်နေရတယ်လေ။
မပြန်ခင် သောင်းကျန်းလိုက်ဦးမဟဲ့လို့ စိတ်ကူးရင်း ပျော်နေတဲ့ သနားစရာ Angel Shaper မှန်းချက်နဲ့ နန်းထွက် မကိုက်ဘူး ဖြစ်ရပြီပေါ့။ ခုတော့ ချစ်တဲ့ အကိုအမတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဂရုစိုက်မှု၊ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သမှု တွေကြောင့် သက်သာလာလို့ နောက်နေ့ ကစပြီး ဘလော့တခွင် ပြဲပြဲစင်အောင် ဝင်ရောက်မွှေနှောက် သောင်းကျန်း နိုင်တော့မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါကြောင်းနှင့် ဆေးကုပေးတဲ့ မမဆုမွန်၊ ဖွားကီနဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ဆရာဝန် ကိုမြစ်၊ မကြီးနှင်း၊ သူငယ်ချင်းညီမတွေဖြစ်တဲ့ ပါးလုံးနဲ့ ဝက်စုတ်၊ စလုံးကနေ စိတ်ပူပြီး "ဆေးခန်းသွား၊ ဆေးသောက် ပေတယ်၊ တေတယ်" လို့ ဖုန်းဆက်ပြီးဟောက်ဖော်ရတဲ့ သူငယ်ချင်း ရေတမာ၊ "ချင်းပိန်...နင့်လက်နှစ်ဖက်လုံး ဖြတ်ပလိုက်ဟာ ရှုပ်တယ်" ဆိုပြီးကြင်နာတဲ့ အားပေးမှုနဲ့ အကြံပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းလကြီး (တလနွန်)၊ "ညီမလေးရေ...အအေးမခံနဲ့၊ ခဏခဏဖြစ်ရင် နှလုံးရောဂါပါဖြစ်တတ်တယ်၊ ဂရုစိုက်နော်။ အိပ်ရေးဝဝ အိပ်ပေးရတယ်" လို့ အားပေးနားချသွားတဲ့ ကိုဘိုကြီး(ကိုမိုးကုတ်သား)၊ "င့ါအမေ သောက်တဲ့ မြန်မာဆေးတွေ မေးပေးထားမယ်။ ပြန်လာရင် အဲဒါနဲ့ သေချာကုလိုက်ရင် ကောင်းသွားလိမ့်မယ် သယ်ရင်းနော်။ ဘာမှအားမငယ်နဲ့ " လို့ အားပေးသွားတဲ့ သူငယ်ချင်း နန်းဝေ (ချစ်နန်းဝိုင်)၊ စီဘောက်စ်က တစ်ဆင့် စိတ်ပူပြီး လာအော်၊ လာမေးကြသူတွေ၊ ဆုတောင်းပေးသွားကြသူတွေ၊ သူငယ်ချင်းမောင်နှမများ အားလုံးကို ကျေးဇူးကြီးကြီးတင်ပါတယ်လို့။
ကျေးဇူးတင်တယ် ဆိုတဲ့ စကားကို ကျေးဇူးတင်လို့ တင်မှန်းသိအောင်တောင် ပြောမပြတတ်၊ ဖော်မပြတတ်တဲ့ Angel Shaper ချင်းတိုင်းရင်းသူလေး တစ်ယောက်ကို နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။
Angel Shaper ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြန်မာလိုပဲပြောတော့မယ် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်သလို လေးစားချစ်ခင်ရပါတယ်ဗျာ။
Copyright @ 2009 - ♪ Angel Shaper